ပွုံးနတေိုငျး ပြျောနတေယျလို့မထငျပါနဲ့ ကြှနျမ မပြျောပမေယျ့ ရအောငျ ပွုံးတတျတဲ့ အကငျြ့လေးရှိတယျ - Tameelay
ပွုံးနတေိုငျး ပြျောနတေယျလို့မထငျပါနဲ့ ကြှနျမ မပြျောပမေယျ့ ရအောငျ ပွုံးတတျတဲ့ အကငျြ့လေးရှိတယျ နာကငျြကငျြနဲ့လဲ လှလှပပလေး ပွုံးပွတတျဖို့အထိ ကြှနျမ လကေ့ငျြ့ထားပါတယျ ။
ပြျောရာမှာ မနရေ တျောရာမှာ နနေရေတဲ့ ဘဝမှာ လှတျလှတျလပျလပျ ပွုံးရ ပြျောရတဲ့အခြိနျတှထေကျ ပြျောအောငျ မနညျးနနေရေတဲ့အခြိနျတှကေသာ ပိုမြားခဲ့တာလေ ။
ဒါကိုပဲ ဘဝလို့ ချေါတယျလို့ ထငျပါတယျ ။
စလုံးရေ စကတညျးက . . . အူဝဲနဲ့စခဲ့ရတာလညျး အမွဲတမျး အမှတျရပါတယျ ။
ကိုယျတဈဦးတညျးတဈယောကျတညျး မှေးဖှားလာခဲ့ရတာကိုလဲ အမွဲပဲ သတိတရ ရှိပါတယျ ။
တဈစုံတဈယောကျ ရှိမှ တဈစုံတဈယောကျက ပြျောအောငျ ထားမှ ပြျောအောငျနတေတျတဲ့ အရငျကလို ခပျညံ့ညံ့ကောငျမလေးတဈယောကျ မဟုတျတော့ဘူး ။
အခုဆို မပြျောတဲ့အရပျမှာ အားရပါးရ ရယျတတျလာတဲ့အထိ ဟနျဆောငျတတျ မွိုသိပျတတျလာပါပွီ ။
ရငျ့ကကျြလာတာမြိုးဆိုတာထကျ ဘဝအကွောငျးကို အရငျကထကျ ပိုပွီးသိလာတယျလို့ပဲ ခေါငျးစဉျတပျပါတယျ ။
တဈစုံတဈယောကျ အပျေါ မှီခိုပွီးမှ ပြျောရတဲ့အပြျောတှဟော . .. ခဏတာပဲ ခံတယျ ။ သူပေးသလောကျ သူဆန်ဒရှိသလောကျပဲ အခြိနျကွာတတျတာလေ ။
မနကျဖွနျ ဒါမှမဟုတျ ဒီနလေဲ့ အဲ့ဒီ အပြျောတှကေနေ အငိုတှေ ခဏခဏ ဖွဈခဲ့ဖူးပွီးပွီမဟုတျလား
ကြှနျမ နောကျထပျ နာကငျြမခံစားရအောငျ အမှတျအတေးလေးတော့ထားပါတယျ ။ကိုယျ့ရဲ့ ပြျောရှငျမှုဆိုတာ ကိုယျနဲ့ဆိုငျတယျဆိုတာ စပွီးသိကတညျးက ကြှနျမ မပြျောပမေယျ့လဲ ရအောငျ ပွုံးတယျ ။
မကျြနှာပွောငျတယျလို့ ခေါငျးစဉျ တပျခငျြလဲ တပျပါ ဒါပမေယျ့ ကိုယျမကျြရညျကလြို့လဲ လှောငျရယျမယျ့လူတှခေညျြး ရပျနတေဲ့အရပျမှာ စာနာပါဆိုပွီး လိုကျပွောပွနတောထကျစာရငျ ကြှနျမ အဆငျပွပေါတယျဆိုပွီး ညာလိုကျတာက ပိုပွီး အဆငျပွပေါတယျ ။
လူတဈယောကျ ပြျောခွငျးမပြျောခွငျးဆိုတာ သူ့နှုတျခမျးက အပွုံးတှနေဲ့ မဆိုငျတဲ့အကွောငျး လူတဈယောကျကို နားလညျခငျြပါတယျဆိုရငျ သူ့စကားတှခေညျြးကို နားထောငျရုံမဟုတျပဲ မကျြဝနျးက စကားလုံးတှကေို နားလညျတတျအောငျ ကွညျ့တတျတဲ့အကွောငျး တခြို့လူတှကေို နားလညျသဘောပေါကျတတျစခေငျြတယျ
ကြှနျမကို ကွညျ့ပါ ပွုံးနတေဲ့အခါတိုငျး ရယျနတေိုငျးအခါတိုငျး သူအဆငျပွနေတောပဲ ပြျောနတောပဲလို့ ထငျရငျ မှားလိမျ့မယျ ကြှနျမ ဆိုတာက မပြျောလဲ အားရပါးရ ပွုံးတတျတယျလေ ။
ပြုံးနေတိုင်း ပျော်နေတယ်လို့မထင်ပါနဲ့ ကျွန်မ မပျော်ပေမယ့် ရအောင် ပြုံးတတ်တဲ့ အကျင့်လေးရှိတယ် နာကျင်ကျင်နဲ့လဲ လှလှပပလေး ပြုံးပြတတ်ဖို့အထိ ကျွန်မ လေ့ကျင့်ထားပါတယ် ။
ပျော်ရာမှာ မနေရ တော်ရာမှာ နေနေရတဲ့ ဘ၀မှာ လွတ်လွတ်လပ်လပ် ပြုံးရ ပျော်ရတဲ့အချိန်တွေထက် ပျော်အောင် မနည်းနေနေရတဲ့အချိန်တွေကသာ ပိုများခဲ့တာလေ ။
ဒါကိုပဲ ဘ၀လို့ ခေါ်တယ်လို့ ထင်ပါတယ် ။
စလုံးရေ စကတည်းက . . . အူဝဲနဲ့စခဲ့ရတာလည်း အမြဲတမ်း အမှတ်ရပါတယ် ။
ကိုယ်တစ်ဦးတည်းတစ်ယောက်တည်း မွေးဖွားလာခဲ့ရတာကိုလဲ အမြဲပဲ သတိတရ ရှိပါတယ် ။
တစ်စုံတစ်ယောက် ရှိမှ တစ်စုံတစ်ယောက်က ပျော်အောင် ထားမှ ပျော်အောင်နေတတ်တဲ့ အရင်ကလို ခပ်ညံ့ညံ့ကောင်မလေးတစ်ယောက် မဟုတ်တော့ဘူး ။
အခုဆို မပျော်တဲ့အရပ်မှာ အားရပါးရ ရယ်တတ်လာတဲ့အထိ ဟန်ဆောင်တတ် မြိုသိပ်တတ်လာပါပြီ ။
ရင့်ကျက်လာတာမျိုးဆိုတာထက် ဘ၀အကြောင်းကို အရင်ကထက် ပိုပြီးသိလာတယ်လို့ပဲ ခေါင်းစဉ်တပ်ပါတယ် ။
တစ်စုံတစ်ယောက် အပေါ် မှီခိုပြီးမှ ပျော်ရတဲ့အပျော်တွေဟာ . .. ခဏတာပဲ ခံတယ် ။ သူပေးသလောက် သူဆန္ဒရှိသလောက်ပဲ အချိန်ကြာတတ်တာလေ ။
မနက်ဖြန် ဒါမှမဟုတ် ဒီနေ့လဲ အဲ့ဒီ အပျော်တွေကနေ အငိုတွေ ခဏခဏ ဖြစ်ခဲ့ဖူးပြီးပြီမဟုတ်လား
ကျွန်မ နောက်ထပ် နာကျင်မခံစားရအောင် အမှတ်အတေးလေးတော့ထားပါတယ် ။ကိုယ့်ရဲ့ ပျော်ရွှင်မှုဆိုတာ ကိုယ်နဲ့ဆိုင်တယ်ဆိုတာ စပြီးသိကတည်းက ကျွန်မ မပျော်ပေမယ့်လဲ ရအောင် ပြုံးတယ် ။
မျက်နှာပြောင်တယ်လို့ ခေါင်းစဉ် တပ်ချင်လဲ တပ်ပါ ဒါပေမယ့် ကိုယ်မျက်ရည်ကျလို့လဲ လှောင်ရယ်မယ့်လူတွေချည်း ရပ်နေတဲ့အရပ်မှာ စာနာပါဆိုပြီး လိုက်ပြောပြနေတာထက်စာရင် ကျွန်မ အဆင်ပြေပါတယ်ဆိုပြီး ညာလိုက်တာက ပိုပြီး အဆင်ပြေပါတယ် ။
လူတစ်ယောက် ပျော်ခြင်းမပျော်ခြင်းဆိုတာ သူ့နှုတ်ခမ်းက အပြုံးတွေနဲ့ မဆိုင်တဲ့အကြောင်း လူတစ်ယောက်ကို နားလည်ချင်ပါတယ်ဆိုရင် သူ့စကားတွေချည်းကို နားထောင်ရုံမဟုတ်ပဲ မျက်ဝန်းက စကားလုံးတွေကို နားလည်တတ်အောင် ကြည့်တတ်တဲ့အကြောင်း တချို့လူတွေကို နားလည်သဘောပေါက်တတ်စေချင်တယ်
ကျွန်မကို ကြည့်ပါ ပြုံးနေတဲ့အခါတိုင်း ရယ်နေတိုင်းအခါတိုင်း သူအဆင်ပြေနေတာပဲ ပျော်နေတာပဲလို့ ထင်ရင် မှားလိမ့်မယ် ကျွန်မ ဆိုတာက မပျော်လဲ အားရပါးရ ပြုံးတတ်တယ်လေ ။